Budata Angry Birds maka Windows
Free Budata maka Windows (74.30 MB)
Budata Angry Birds,
Edepụtara onye nrụpụta egwuregwu nọọrọ onwe ya Rovio, Angry Birds bụ egwuregwu na -atọ ụtọ ma dịkwa mfe igwu egwu.
Ụdị egwuregwu a na -eji agagharị agagharị na -enye nde ndị ọrụ gburugburu ụwa ihe ntụrụndụ dị elu, na ụdị egwuregwu kọmputa na -enye anyị ohere ịnweta otu egwuregwu ahụ kpamkpam. Na Angry Birds, ọ na -amalite site na ezi piglets na -ezu ohi akwa nnụnụ iwe. Noge a, anyị na -abanye negwuregwu ahụ ma nyere nnụnụ ndị iwe ji aka ịbọ ọbọ na ezì ruru unyi site niji ike mbibi ha. Ma ọ gaghị adị mfe otú ahụ; nihi na ezì ewepụtala usoro nchekwa pụrụ iche iji chebe onwe ha. Iji merie ihe nchebe ndị a, nnụnụ anyị iwe ji aghaghị imeri ihe mgbagwoju anya dị iche iche ma nwee amamihe wee rute ezi.
Nnụnụ Angry na -enye ndị egwuregwu egwuregwu ntụrụndụ. Negwuregwu ahụ, anyị na-eji nnwepụ slingshot tụba nnụnụ na-ewe iwe ka ha na-aga ezì na-agbalị ibibi ezì niile dị na ngalaba site na idobe ihe na ezi ma ọ bụ na-achọ ozugbo na ezi. Anyị nwere ike iji ụdị nnụnụ iwe dị iche iche na egwuregwu. Ọ bụ ezie na enwere ike ịtụba ụfọdụ nime ha na ikuku, ndị ọzọ nwere ike ịgbawa dị ka bọmbụ ma kpatara nnukwu mbibi gburugburu ha.
Nnụnụ Angry bụ egwuregwu ga-enwerịrị ndị ọrụ nke afọ niile nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu.
Angry Birds Ụdịdị
Nha faịlụ: 74.30 MB
Obi ụtọ Wheels, nke a makwaara dị ka Wheels Obi intọ na English, bụ nsụgharị kọmputa nke egwuregwu...
slither.io bụ egwuregwu agwọ nke nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ iji gbuo oge. Slither.io, egwuregwu ị...
Candy Crush Saga bụ egwuregwu kachasị atọ ụtọ 3 egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu dị ka...
Bubble Shooter bụ egwuregwu ịgba bọọlụ ama ama nke ị nwere ike igwu na kọmputa gị. Egwuregwu a, nke...
Run Temple: Oz bụ egwuregwu mgbapụ ị nwere ike igwu ma ọ bụrụ na ị na -eji kọmpụta ma ọ bụ mbadamba...
Real Pool 3D - Poolians bụ egwuregwu ọdọ mmiri ị ga-enwe mmasị igwu egwu ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị...
Nime Out bụ egwuregwu nka ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na kọmputa Windows gị. Egwuregwu ahụ,...
Altos Adventure bụ egwuregwu ịkwọ ụgbọ mmiri nke nwere ihe ngosi pere mpe nke ejiri ọkụ dị ike na...
Hero Touchdown: Oge ọhụrụ so na egwuregwu egwuregwu ụwa niile enwere ike ịme na ekwentị, mbadamba...